अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो डा. केसीको अनसन — Harpraharnews.com
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो डा. केसीको अनसन
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै डा. गोविन्द केसी विगत २४ दिनदेखि आमरण अनसनमा छन् । डा. केसीको यो अनशन अहिलेसम्मकै लामो भएकाे छ ।
साउनको महिना अनि पहिलो सोमबार, किन उपवास बस्ने ?